Ems Factory Wholesale Muscle Sculpture Masinina Ems Body Sculpting Machine
Fampiharana ny milina ems
Ny Magshape dia afaka manamboatra ny rojo hanamafisana ny hozatra fototra, ao anatin'izany ny hozatry ny kibo hozatra lehibe (hozatry ny kibo refy, hozatra mivalona ivelany, hozatra mivalona anatiny, hozatra kibo mamindra) ary ny gluteus maximus ao amin'ny hozatra kely fototra. Ny hozatra fototra dia afaka miaro ny hazondamosina, mitazona ny fitoniana ny vatan-kazo, mitazona ny fihetsika marina, manatsara ny fahafahan'ny fihetsiketsehana ary mampihena ny vintan'ny ratra, manome fanampiana ara-drafitra ho an'ny vatana iray manontolo, ary mamorona fihetsika tanora.
Tombony amin'ny masinina sary sokitra ems
(1) Magshape dia famolavolana vatana sy fitaovana fananganana hozatra marobe. Izy io dia mety amin'ny fampihenana, famolavolana, fahazoana hozatra, famoahana tavy, fanaovana tsipika akanjo ary fampiakarana valahana, tsara Ho an'ny fahasalamana.
(2) Izy io dia mandaitra indrindra ho an'ny vody sy ny kibo. Mampiasa teknolojia an-tsaha elektromagnetika (HIFEM) mifantoka amin'ny hery avo lenta izy io mba hiteraka fipoahana vetivety amin'ny fihenan'ny hozatra, ka mitombo ny hakitroky ny hozatra, mampihena ny isan'ny volavolan-dalàna, manatsara ny fahazavana ary manatsara ny feony. Io ihany no fomba hanampiana ny vehivavy sy ny lehilahy manangana hozatra. ary mandoro tavy, ary io no fomba voalohany fampiakarana valahana voalohany.
(3) Amin'ny alàlan'ny fampihenana ny tavy amin'ny kibo sy amin'ny fananganana fototry ny hozatra eo ambanin'ny tavy, ampio ireo marary hahatratra ny tendrena vatana manify kokoa sy atletika.
(4) Rehefa apetaka amin'ny vodiny dia afaka manome endrika aorian'ny fampihetseham-batana ilay marary. Saingy tsy ampiasaina ny fitsipiky ny fanafanana / fampangatsiahana, noho izany dia tsy atahorana hirehitra, handratra na hamontsina.
(5) Ny drafitry ny fitsaboana natoro dia ny fanaovana fitsaboana 30-minutetreatment efatra ao anatin'ny tapa-bolana. Ny vokatra tsara indrindra dia ho hita aorian'ny telo volana, ary hitohy hivoatra aorian'ny enim-bolana.
(6) Izy io dia afaka manamafy ny hozatra gluteal na hozatry ny kibo ary mandoro tavy nefa mitazona.
Modely telo an'ny masinina magshape
MODE SPORT + MODY GENTLE + MODE PROFESSIONAL
Onja elektromagnetika (angovo)
Olona mifandray: Sunny Zhao, Alex Song
Mailaka: Sunny@sanhebeauty.com, Alex@sanolasers.com
Teo aloha: Pinxel Fractional RF Microneedle Device miaraka amin'ny fanjaitra insulated / CE nekena ho an'ny radio matetika RF radio matetika ho an'ny tarehy
Manaraka: Varotra mafana 2021 radio matetika fribolana microneedling RF hoditra manamafy hoditra
Fiovan'ny vatana Hi-Emt
Masinina fananganana hozatra
Masinina sokitra hozatra
Masinina fanentanana hozatra
Masinina fanaovana sary sokitra
Masinina hozatra Stimulator
portable Body sculpting muscle ems tesla sculpt ...
CE nankatoavina 4 miasa ho an'ny vatana hozatra Buildin ...
2021 Fitaovana hozatra vao haingana indrindra
Masinina fananganana hozatra Magshape EM-sculpt HIFEM
Hi-Emt 4 loha EMS vatana sculpt hozatra hatsaran-tarehy ma ...
fanesorana ny holatra, Co2 Laser Laser miato, Masinina mpanentana hozatra Ems, Laser estetika Co2, Fanesorana volo Shr Opt Ipl, Shr Ipl Opt,